तपाईंको छविहरूको ढाँचा कसरी cr2 बाट कच्चा मा परिवर्तन गर्ने क्रिएटिभ अनलाइन
मेरी गुलाब | | ट्यूटोरियलहरू, धेरै
हाम्रो पुस्ता निरन्तर तस्बिरहरूको प्रकार्यहरूको बारेमा जानकारीको बमबारीको साथ बाँच्दछ ढाँचाहरू, छविहरूको साइज वा रंग, हामीसँग अवशोषित गर्न धेरै जानकारी छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई RAW र CR2 बीचको भिन्नताहरू बुझ्न मद्दत गर्न गइरहेका छौं। र हामी तपाइँ कसरी कम्प्यूटर र अनलाइन उपकरण संग ढाँचा को प्रकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ विस्तार मा हेर्नेछौं। तर कहाँ सुरु गर्ने? चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंलाई गति दिनको लागि यहाँ छोटो परिचय छ!
1 फाइल रूपान्तरण के हो?
2 कम्प्युटर उपकरणको साथ छवि कसरी रूपान्तरण गर्ने
2.3 क्यानन उपयोगिताहरू
3 अनलाइन उपकरणहरूको लागि छविलाई धन्यवाद रूपान्तरण गर्नुहोस्
3.1 पीडीएफ मल
5 अनलाइन रूपान्तरण
फाइल रूपान्तरण के हो?
फाईलको रूपान्तरण भनेको एउटा प्रोग्राममा अर्को कार्यक्रममा सिर्जना गरिएको परिवर्तन हो जुन अर्को प्रोग्रामद्वारा बुझ्न सकिन्छ। हामीले पहिले उल्लेख गरेका ढाँचाका प्रकारहरू सम्झँदै, हामी तिनीहरू बीचको भिन्नतालाई व्याख्या गर्नेछौं।
कच्चा यो एक डिजिटल फाइल ढाँचा हो जसले छविहरूलाई बुझाउँछ जसमा क्यामेरामा नै एन्हान्समेन्ट एल्गोरिदमहरू प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले यसले सेन्सरद्वारा क्याप्चर गरिएको रूपमा सम्पूर्ण छवि डेटा समावेश गर्दछ।
CR2 (क्यानन कच्चा 2) एक्सटेन्सन हो जुन क्याननले RAW बचत गर्न प्रयोग गर्दछ, त्यो फोटो RAW मा बनाइएको हो, केवल क्याननले यसको "कच्चा" छविहरूलाई अर्को नाम दिने निर्णय गर्यो। यी प्रकारका फाईलहरू धेरै ठूला भएकाले, तिनीहरू साझेदारीको लागि उपयुक्त छैनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई पठाउनु अघि तिनीहरूलाई थप सामान्य छवि ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यहाँ हामी तपाइँलाई केहि कम्प्युटर र अनलाइन उपकरणहरू छोड्छौं ताकि तपाइँ तपाइँको फाइलहरू रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ:
कम्प्युटर उपकरणको साथ छवि कसरी रूपान्तरण गर्ने
CR2 खोल्न र रूपान्तरण गर्नका लागि प्रायः प्रयोग गरिएका कार्यक्रमहरू फोटोशप, RAW छवि दर्शक, वा क्यानन उपयोगिताहरूमा क्याननको आफ्नै सफ्टवेयर हुन्।
Adobe Photoshop ले "फोटो स्टुडियो" मा अनुवाद गर्छ र Adobe Systems Incorporated द्वारा विकसित फोटो सम्पादक हो। यो मुख्यतया फोटो र ग्राफिक्स परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं मुख्य पृष्ठ मा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एडोब, एक नि: शुल्क 30-दिन परीक्षण छ, त्यहाँबाट, तपाईंले इजाजतपत्रको लागि तिर्नुपर्छ। फोटोशपमा तपाईंले आफ्नो मनपर्ने तस्विरहरूको प्यारामिटरहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले यसलाई बचत गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएपछि, हामी तपाईंलाई उपलब्ध विभिन्न ढाँचाहरू देखाउनेछौं:
माथिको उपकरणपट्टीमा, तपाईंले File >> Save As... मा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
एउटा विन्डो खुल्नेछ जसमा तपाईंले फाइलको स्थान र तपाईंले यसलाई बचत गर्न चाहनुभएको ढाँचा चयन गर्नुपर्नेछ। फोटोशपमा तपाईले तल देख्नुहुने ढाँचाहरू छन्, सबैभन्दा सामान्य हो Photoshop RAW, JPG वा PNG।
२०२० मा यसको सुरूवात भएदेखि, Adobe Camera Raw कच्चा छविहरू आयात र वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ, जसले धेरै पेशेवर फोटोग्राफरहरूलाई मद्दत गरेको छ। यो Adobe Photoshop प्लगइन हो। सामान्यतया यो यस कार्यक्रमको साथ आउँदछ, यदि यो तपाइँको मामला होइन भने, यहाँ हामी तपाईंलाई लिङ्क छोड्छौं त्यसैले तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई स्थापना गर्न चरणहरू छन्:
अघिल्लो लिङ्कमा तपाईंले यो प्लगइन डाउनलोड गर्न फाइलहरू फेला पार्नुहुनेछ। विन्डोज र macOS दुबैको लागि तपाईंले समान चरणहरू पालना गर्नुपर्नेछ:
सबै Adobe अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्।
यसलाई अनजिप गर्न डाउनलोड गरिएको .zip (Windows) र .dmg (MacOs) फाइलमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। विन्डोजले तपाईंको लागि फाइल अनजिप गर्न सक्छ। MacOs को लागि Camera Raw 10.5 को अवस्थामा, तपाईंले यसलाई अनजिप गर्न .zip फाइलमा डबल-क्लिक गर्नुपर्छ।
स्थापनाकर्ता सुरु गर्न परिणाम स्वरूप .exe (Windows) र .pkg (MacOs) फाइलहरूमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्।
स्क्रिनमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
Adobe अनुप्रयोगहरू पुन: सुरु गर्नुहोस्।
एक पटक स्थापना भएपछि, तपाईंले फोटोशप खोल्नु पर्छ र माथिको ड्रप-डाउन बारमा, फिल्टरहरू भित्र, तपाईंले प्लगइन पाउनुहुनेछ।
EOS उपयोगिता क्यानन क्यामेराहरूको लागि सञ्चार सफ्टवेयर हो, जुन EOS क्यामेराबाट कम्प्युटरमा छविहरू स्थानान्तरण गर्न सजिलो बनाउँछ। यो अनुप्रयोगले तपाइँलाई USB केबल, Wi-Fi जडान (यदि क्यामेरा समावेश छ) वा छुट्टै वायरलेस फाइल ट्रान्समिटर (बाहेक) प्रयोग गरेर तपाइँको कम्प्युटरबाट टाढाबाट क्यामेरा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। EOS M)
अनलाइन उपकरणहरूको लागि छविलाई धन्यवाद रूपान्तरण गर्नुहोस्
पीडीएफ मल एक अनलाइन फाइल रूपान्तरण सफ्टवेयर हो। यस प्रकारको वेब पृष्ठ तपाईंसँग कुनै पनि डाउनलोड नगरी अघिल्लो कार्यक्रमहरू नभएको अवस्थामा काममा आउन सक्छ। यो ढाँचा चयन गर्न जत्तिकै सरल छ जसमा तपाइँ आफ्नो छवि स्थानान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ र यसलाई रूपान्तरण गर्न सफ्टवेयरको लागि पर्खनुहोस्। यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ।
स्रोत: पीडीएफ मल
तस्बिरहरू रूपान्तरण गर्न लामो समय लाग्न सक्छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई अर्को निःशुल्क अनलाइन उपकरण ल्याउँछौं। सक्नु मात्रै होइन छविहरू रूपान्तरण गर्नुहोस् iLoveIMG को साथ, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ कम्प्रेस, काट, रूपान्तरण, रिसेट बाट यहाँ तपाइँ केहि क्लिकहरूमा तपाइँको एनिमेटेड GIF हरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र हो, यो पनि छ मुक्त!
अनलाइन-रूपान्तरण गर्नुहोस् अर्को अनलाइन फाइल कन्भर्टर हो दर्ता आवश्यक छैन र नि: शुल्क छ। यो एक पृष्ठ हो जहाँ हामी मल्टिमिडिया फाइलहरूलाई अन्य ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं ...
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » कसरी आफ्नो छविहरू कच्चा बाट cr2 मा परिवर्तन गर्ने
मौलिक र रचनात्मक लोगो